किन आवश्यक छ स्मार्ट फोन सुरक्षा र बचत ?
तपाईं आफ्नो मोबाइल फोनको सुरक्षामा कत्तिको होसियार हुनुहुन्छ ?
मोेबाइल प्रयोगबारे सोध्नु त बाञ्छनिय हुन्छ । किनकी हामी मोबाइल फोनको प्रयोगमा यतिधेरै व्यस्त भई सकेका छौं कि, जतिबेला पनि हामी आफ्नो फोनमा भुलि रहेका हुन्छौं । थाहै हुन्न समय कतिबेला सकियो ।
अझ, स्मार्ट फोनले यति धेरै फिचरहरु ल्याएको छ कि, यसको प्रयोग बिना हामी केही पनि होइनौं । हामीलाई स–स्याना डाटाहरु याद गर्ने समेत कष्ट गर्नु पर्दैैन । । स्मार्ट फोनले नै हाम्रो काम गरिदिन्छ । हुन पनि, अरुले नै फत्ते गरिदिने काममा किन जोर लगाउनु ?
हेर्नुस् त एउटा सामान्य स्मार्ट फोनले हाम्रो कति धेरै काम गरिदिन्छ ?
हामी सजिलै विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को कुनामा के भई रहेको छ ? तत्कालै थाहा पाउन सक्छौं । हाम्रा सम्झनाहरु फोटो, भिडियोमा कैद गर्न सक्छौं । घण्टौं बैंकमा लाइन लागेर कारोबार गर्नु पर्दैन । मोबाइल बैंकिङ मार्फत हत्केलाबाटै सबै काम गर्न सक्छौं । छैन त काइदा ?
मोबाइल फोनका यति धेरै फाइदाहरु हुँदा हुँदै यसका केही बेफाइदा पनि छन् । जसलाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं । हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण अट्ने मोबाइल फोनबाट हाम्रो सामान्य असावधानीले कतिसम्म हानी पु¥याउन सक्छ ? त्यो पनि जान्न खाँचो छ । मोबाइल फोन सुरक्षाबारे यो जानकारी तपाईँका लागि काम लाग्न सक्छ ।
स्मार्ट फोनको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
स्मार्ट फोन सुरक्षा भनेको साइबर अट्याक भेक्टरहरूको विभिन्न दायराको विरुद्ध मोबाइल उपकरणहरूको रक्षा गर्ने अभ्यास हो । प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, नेटवर्क लगइन प्रमाणिकरण, वित्त, र सुरक्षालाई धम्की रोक्न सक्नु नै स्मार्ट फोन सुरक्षा हो ।
यसमा प्रविधि, नियन्त्रण, नीति, र उत्तम अभ्यास समावेश हुन्छ । फोन सुरक्षाले हामीलाई सबै प्रकारको मोबाइल सुरक्षा खतराहरूबाट जोगिन सक्छौं । मोबाइल सुरक्षामा उद्यमहरूसँग काम गर्ने हाम्रो अनुभवको आधारमा हामी निम्न चरणहरू लिने सल्लाह दिन्छौंः
स्पष्ट मोबाइल उपयोग नीति स्थापना गर्नुहोस्
पहिलो, मोबाइल उपकरणहरू संगठन–व्यक्ति सुरक्षा नीतिहरूमा समावेश गर्नुस् । मोबाइल सुरक्षा नीतिहरूको स्वीकार्य प्रयोगले चोरी विरोधी उपायहरू, अनिवार्य सुरक्षा सेटिङ र अधिक कभर गर्छ । नीति फ्रेमवर्क अनुपालन अनुगमन र कमिहरूको समाधान समावेश गर्न सक्छ ।
फिंगरप्रिन्ट सेट गर्नुहोस् वा अनुहार पहिचान
तपाईंको फोन हराउनु सायद अनौठो होइन । एक सुरक्षित पासपोर्ट (विशेष गरी फिंगरप्रिन्ट÷अनुहार पहिचान जस्तो केही चिज)ले तपाईको फोन सुरक्षित राख्छ ।
डाटा इन्क्रिप्शन सक्षम गर्नुहोस्
धेरै उपकरणहरू पहिले नै इन्क्रिप्शन सक्षम छ । यदि तपाईंको उपकरण छैन भने, तपाईं सेट अप गर्नुस् । डाटा ईन्क्रिप्शनले तपाइँको जानकारी ह्याकरहरूबाट सुरक्षा गर्न सक्छ । कोडमा स्क्र्याम्बल गरेर जब तिनीहरू सर्भरबाट अर्को सर्भरमा सर्दै जान्छन् त्यसपछि यो सबैभन्दा कमजोर हुन्छ ।
रिमोट वाइप क्षमताहरू सेट अप गर्नुहोस्
यसबाट तपाईं स्मार्ट फोनबाट कुनै पनि बेला डाटा हटाउन सक्नु हुन्छ । तपाईसँग स्मार्ट फोन नै नभए पनि यो एक ठूलो सुरक्षा सुविधा हो । यदि, तपाईंको फोन हरायो । तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्न । रिमोट वाईप सेट अप गर्ने प्रक्रिया उपकरणद्वारा फरक छ । उत्तरी मिशिगन युनिवर्सिटीको आईटी विभागको यो गाईडले टाढाको पछाडि सक्षम पार्न कसरी रूपरेखा बनाउछ । जुनसुकै उपकरण तपाईसँग छ । यदि तपाईंसँग प्रिपी जस्ता उपकरण व्यवस्थापन उत्पात छ भने ट्रिमिंग जस्ता अन्य क्षमताहरूको साथ रिमोट वाइप सम्भवतः उनीहरूले प्रदान गरेको सेवाको हिस्सा हुन् ।
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि मोबाइल संरक्षण
केवल आधिकारिक विक्रेताहरूबाट स्मार्टफोन खरीद गर्नुहोस् । एन्ड्रोइडको लागि प्याचहरू जारी गर्ने विक्रेताबाट स्मार्ट फोन खरिद गर्नु सुरक्षीत रहनु हो । सबै पासवर्डहरू स्मार्ट फोनमै सेभ गर्नु बानी छ भने हटाउनुहोस् ।
अंतर्निहित एन्ड्रोइड सुरक्षा सुविधाहरूको फाइदा लिनुहोस् । निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क सुरक्षित छ । सार्वजनिक वाइफाइको साथ सावधान रहनुहोस् । एन्ड्रोइड सुरक्षा अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईको एन्ड्रोइड फोनको डेटा जगेडा गर्नुहोस् । न्ययनभि एबिथ बाट मात्र अनुप्रयोगहरू खरीद गर्नुहोस् । तपाईंको उपकरण ईन्क्रिप्ट गर्नुहोस् । यसरी तपाईँ आफ्ना स्मार्ट फोनको सुरक्षा गर्न सक्नु हुन्छ ।
स्मार्टफोन जस्तै हाम्रो दैनिकी कम्युटरसँग पनि जोडिएको छ । आफ्नो कम्प्युटरमा बलियो पासवर्डहरू राख्नुहोस् । तपाईं आफ्नो ईमेल, सामाजिक मिडिया, वा बैंक खातामा लग इन गर्दै हुनुहुन्छ कि ? तपाईं एक बलियो र अद्वितीय पासवर्ड को उपयोग गर्न आवश्यक छ । तपाईको पासवर्डको रूपमा ‘पासवर्ड’ जस्ता सजिलै याद गर्न सक्ने शब्द प्रयोग गर्न यो सजिलो लाग्न सक्छ् । तर, यसले धेरै सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्छ । पहिलो चीज जुन दिमागमा आउँदछ पहिले ह्याकर्सलाई अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ ।
यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस्
१ः पासर्वडमा अक्षर, संख्या, र प्रतीकहरू जोड्नुहोस् ।
–अपरकेस र लोअरकेस अक्षरहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।
–अपेक्षित शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् जस्तै तपाईंको पाल्तु जनावरको नाम, तपाईंको सडक ठेगाना, तपाईंको पति÷पत्नीको नाम, आदि ।
–एक पटक तपाईं एक मजबूत र अद्वितीय पासवर्ड संगै आउनु भएपछि, तपाईं यो फेरि गर्नु पर्छ । किनकि प्रत्येक खाताको लागि प्रत्येक पासवर्ड अद्वितीय हुनुपर्छ । यदि, एक ह्याकर एक खातामा जान्छ । तपाईं तिनीहरूलाई सबै पहुँच गर्न चाहनुहुन्न ।
२ः एन्टीवायरस सफ्टवेयर डाउनलोड र नियमित अपडेट गर्नुहोस् । तपाईं डाउनलोड गर्न वा सफ्टवेयर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ । सबै (वा अधिक) भाइरसहरू तपाईंको कम्प्युटर प्रणालीबाट टाढा राख्न । भाइरस रोकथामको साथसाथै, यदि कसैले तपाईंको प्रणालीमा संक्रमित भयो भने, सफ्टवेयरले तपाईंलाई पत्ता लगाउन र यसलाई हटाउन सक्छ । एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले तपाईंलाई नराम्रो स्पाइवेयरबाट बच्न मद्दत गर्छ ।
३ः सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस् । एन्टिभाइरस सफ्टवेयर डिफेन्सको अन्तिम रेखा हो । तर यसले तपाईलाई पहिलो स्थानमा भाइरसबाट बच्न मद्दत गर्छ । पहिले, कहिल्यै पहिचान गर्न नसकिने वेबसाइट भ्रमण नगर्नुहोस् । ईमेल वा अन्य वेबसाइटमा लिंक गरिएको छ भने । दोस्रो, विश्वासनीय व्यक्तिबाट नभएको फाइल कहिल्यै डाउनलोड नगर्नुहोस् । खराब वेबसाइटहरू र फाईलहरू जहाँ धेरै भाइरसहरू एक कम्प्युटर संक्रमित गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्छन् । यो पनि याद गर्नुहोस् कि जब एक साथी, परिवारको सदस्य, वा सहयोगी ह्याक हुन्छ, तिनीहरूको खाताहरू प्रायः स्वचालित रूपमा भाइरस समावेश सन्देशहरू पठाउछ । यदि तिनीहरूको ईमेल संदिग्ध देखिन्छ (उदाहरणका लागि, धेरै अनचेर्टेस्टिक स्पेलिंग त्रुटिहरू समावेश गर्दछ वा उनीहरू जस्तो ‘ध्वनि’ छैन)तिनीहरूलाई ईमेल पठाउनुहोस् । निश्चित गर्नका लागि फाइल वा लिंक सुरक्षित छ त्यसो गर्नु अघि ।
यी आधारभूत इन्टरनेट सुरक्षा सल्लाहहरू दिमागमा राख्नुहोस् । सतर्क रहनुहोस् । तपाईंले ह्याकर्सबाट आफूलाई बचाउनुहुन्छ । तपाइँको बलियो पासवर्ड र अप–टु–डेट एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्ने प्रयासहरूले तपाइँलाई एक कदम अगाडि राख्छ । तपाइँ इन्टरनेटको मजा लिने बित्तिकै दिमागको शान्तिको मजा लिन सक्नुहुन्छ ।
आर्थिक बचत किन ?
जीवनमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ वित्त वा पैसाको व्यवस्थापन । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त । सेवानिवृत्तिमा आफ्नो जीवनको आनन्द लिन पर्याप्त आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनु भनेको ५० वर्ष भन्दा कम उमेरकाको दिमागमा अन्तिम कुरा हो ।
जहाँसम्म, धेरै व्यक्तिहरूको धारणा छ कि वित्तीय सुरक्षाको लागि काम गर्नु आत्म–वञ्चित हुनुको अभ्यास होइन । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही तत्काल फाइदा पनि छ । किनकि वित्तीय असुरक्षा तनावको गम्भीर स्रोत बन्न सक्छ ।
१ः रमाईलो गर्नुहोस्
आफू जवान हुँदा आनन्द लिनुहोस् । तपाईं बुँदो हुँदा दयनीय हुनुका लागि तपाईंसँग प्रशस्त समय हुनेछ । एक सफल, खुशी जीवन बिताउनु भनेको परिवार र साथीहरूसँग समयको बीचमा सन्तुलन खोज्नु हो । काम र फुर्सदको बीचमा । तपाईको जीवन र तपाईको भविष्य बीचको सन्तुलन कायम गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक रूपमा, हामी बाँच्न सक्दैनौं । जस्तो कि आज हाम्रो अन्तिम दिन हो। हामीले आज हामीले खर्च गर्ने र हामी भविष्यमा के खर्च गर्ने बीच निर्णय गर्नुपर्छ । सही सन्तुलन खोज्नु भनेको वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण कदम हो।
२ः तपाईंको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सम्पत्ति – तपाईं
तपाईंको सीप, ज्ञान, र अनुभव तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। तपाईंको भविष्यको आयको मूल्य कुनै पनि बचत वा लगानी बन्नेछ । जुन तपाईं आफ्नो करिअर को सबै भन्दा लागि हुन सक्छ। तपाईंको जागिर र भविष्यमा वित्तीय स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्राप्त गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन्। केवल कार्यबलमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि, भविष्यको क्यारियर अवसरहरू त्यति उज्यालो हुन्छन् जुन उनीहरूले पहिले गरेका थिए।
आफूलाई एक वित्तीय सम्पत्तीको रूपमा हेर्नुहोस्। आफैंमा लगानी गर्दा भविष्यमा भुक्तानी हुनेछ। कडा परिश्रम, कौशल र ज्ञानको लगातार अपग्रेडिंग र स्मार्ट करिअर छनौटहरू गरेर तपाईंको मूल्य बढाउनुहोस्। तपाईंको करिअर सुधार्नको लागि प्रयासहरूले तपाईंको वित्तीय सुरक्षामा तपाईंको बेल्ट कसिने र अझ बचत गर्ने प्रयासको तुलनामा निकै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
३ः योजनाकर्ता बन्नुहोस्, सेभर होइन
अनुसन्धानले देखाए कि भविष्यका लागि योजना गर्नेहरूले नगर्ने मानिस भन्दा धेरै धनको साथ समाप्त हुन्छन्। सफल व्यक्ति लक्ष्य उन्मुख हुन्छन् – तिनीहरूले लक्ष्यहरू सेट गर्छन् । ती हासिल गर्न योजना विकास गर्छन्। उदाहरणको लागि, यदि तपाईले दुई वर्षमा तपाईको विद्यार्थी चुक्ता गर्ने लक्ष्य राख्नुभयो । तपाईले यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने राम्रो अवसर पाउनुहुनेछ । यदि तपाईले केवल तपाईको विद्यार्थी चुक्ता गर्न चाहानुहुन्छ भने । तर एक सेट गर्न असफल हुनुभयो । दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न छोटो अवधिको लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् ।
दीर्घकालीन लक्ष्यहरू सेट गर्नुको सट्टा, दुबै मापन गर्न मिल्ने र सटीक छोटो छोटो अवधि का लक्ष्यहरूको श्रृंखला सेट गर्नुहोस्।
४ः आर्थिक साक्षर बन्नुहोस्
पैसा कमाउनु एक चीज हो । तर यसलाई बचत गर्नु र यसलाई बढाउनु अर्को कुरा हो । वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी जीवनभर प्रयासहरू हुन् । ध्वनी वित्तीय र लगानी निर्णयहरू गर्नु तपाईंको वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
५ः अवसरहरू लिनुहोस्ः गणना जोखिमहरू लिनुहोस्
जब तपाईं जवान हुनुहुन्छ गणना गरिएको जोखिमहरू लिनु लामो समयको लागि विवेकी निर्णय हुन सक्छ। तपाईंले बाटोमा गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ । तर याद गर्नुहोस्, गल्तीहरू बुद्धिको पाठ हो। तपाईले प्रायः आफ्ना गल्तीहरूबाट तपाईको सफलताहरूबाट बढी सिक्नुहुन्छ। साथै, जब तपाईं जवान हुनुहुन्छ, तपाईं वित्तीय गल्तीबाट छिटो पुनः प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ।
६ः लगानीका लागि पैसा उधारो लिनुहोस् – जीवन शैलीको लागि वित्त होइन
जीवनको लागि क्रेडिट प्रयोग गर्नु तपाईलाई हकदार लाग्ने एक हराउने प्रस्ताव हो जब यो सम्पत्ती निर्माणको कुरा आउछ । लगानीको लागि कुनै पैसा उपलब्ध छैन भन्ने आश्वासन दिन्छ । सापटी लिनका अतिरिक्त ब्याज खर्च जीवन शैली को लागत बढ्छ। उधारो लिएको पैसा लगानीको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । जहाँ तपाईंको लाभले तपाईंको यचचयधण लागतमा बढाउनेछ। यसको मतलब शाब्दिक अर्थमा लगानी गर्नु (शेयर, बन्ड, आदि), वा यसको अर्थ आफैंमा लगानी गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तपाईंको शिक्षाको लागि, व्यवसाय सुरु गर्न वा घर किन्न । यी अवस्थाहरूमा प्ला लेरिजिंग प्रदान गर्न सक्छ । तपाईंको छिटो आर्थिक लक्ष्यमा पुग्नको लागि पनि यो आवश्यक छ ।
तपाई को मेहनत को कमाई लाई सहि मुल्यांकन गर्दै बेलायत बाट मनिटु लिमिटेड ले नेपाल को लागि निशुल्क पैसा ट्रान्सफर को योजना ल्याएको छ। जस अन्तर्गत तपाई ले मनिटु को एप अथवा वेबसाइट https://bit.ly/3BRyRX3 प्रयोग गरि उत्कृष्ट विनिमय दर सहित छिटो र सुरक्षित तरिका ले नेपाल मा पैसा पठाउन सक्नु हुन्छ। पैसा पठाउदा कुनै शुल्क लाग्ने छैन।